Ukuzoba, isicelo esitsha sokuzoba, sifikelela kuguqulelo lwaso oluzinzileyo | Ubunlog
Nceda ungagxeki izipho zam zobugcisa, kwaye kuncinci ngeTouchpad. Ukuya kwinqanaba: kukho usetyenziso olutsha kwilizwe leLinux. Ithiyiwe Ukudweba kwaye eyona nto ibalulekileyo malunga nale app kulula kwayo. Akukho zingxaki, phantse yonke into iyabonakala kwaye asiboni nto igqithileyo xa sivula usetyenziso. Ifanelekile kwabo bafuna ukuzoba imifanekiso, kodwa ndicinga ukuba isenokuba mfutshane kakhulu kubasebenzisi abaninzi.
Ukuzoba sisicelo esenziwe ikakhulu nge Umfanekiso we-GNOME, kodwa ikwafumaneka kwiPantheon (i-OS yokuqala) kunye neMATE / Cinnamon. Into oyibonayo kumfanekiso wehloko wale nqaku yinguqulelo ye-GNOME kwaye ifakwe ngokulula kwiFlathub, eyona ndawo idumileyo yokufumana usetyenziso lwePlppak. Emva kokusikwa siza kukushiya amakhonkco apho bachaza indlela yokufaka ukuzoba ngenkqubo eyahlukileyo.
Ndingenza ntoni ngokuzoba
Njengoko sele sichazile, sisicelo esilula kwaye kubandakanya izixhobo:
Ifumaneka ngeSpanish, isiNgesi, isiFrentshi kunye neTurkey.
Xa ukhetha esinye sezixhobo, emazantsi siza kubona ukuba loluphi ukhetho esinokuthi silutshintshe, njengombala, ifonti kunye nobukhulu bayo ngombhalo okanye ukuba sifuna isangqa / uxande ukuba sibe nemvelaphi okanye hayi kwaye umbala mni.
Ukuba ufuna ukuyizama, bendizakuthi awuyi kuphulukana nayo nayiphi na into, kodwa awuyi kuthi ukuba unayo inkxaso yephakheji enikwe amandla Flatpak, kuba ukuyifaka kulula njengokucofa esi sixhobo kwaye uyifake kwiziko lakho lesoftware. Into iyatshintsha ukuba ufuna ukuyifaka ngenye indlela, into echaziweyo apha kwaye siza kufaka ingxelo engazinzanga.
Ucinga ntoni ngokuzoba? Ngaba inayo indawo kwicandelo apho sele sinezicelo ezininzi okanye ngaba lukhulu kakhulu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » software » Imizobo » Ukuzoba, isicelo esitsha sokuzoba, sifikelela kuguqulelo lwaso oluzinzileyo
UMoypher Nigthkrelin sitsho
ujongano oluhle, ndiza kuyivavanya kunye nethebhulethi, ndiza kubona ukuba isebenza njani
Phendula uMoypher Nigthkrelin
Inguqulelo entsha ye-GIMP 2.10.10 ifika kwaye ezi ziindaba zayo